VIDEO-Somaliland oo Ku Dhawaaqday in Sanaag aysan Waxba u Qaban Sababtuna Shacabka Tahay Maadaama ay Diideen Inay…
June 10, 2019 puntlandnews Somaliland, Wararka Maanta 0
Puntlandnews.net (Badhan)-Maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qirtay in magaalada Ceerigaabo iyo deegaamada kale ee uu ka maamulo gobolka Sanaag ay asaagood ka hareen.
Guddoomiyaha gobolka Sanaag ugu magacaaban maamulka Somaliland Maxamed Axmed Caalim (Tiimbaro) oo gaarey magaalada Hargaysa ee xarunta Somaliland ayaa waxa uu sheegay in gobolku ka haray deegaamadii kale.
Guddoomiye Tiimbaro waxa uu sheegay in gobolka Sanaag uu dhanka horumarka iyo adeegyada bulshada ka haray gobolada kale ee Somaliland ay maamusho isagoona u sababeeyey in shacabku aysan Somaliland wax la qabsan.
Waxa uu caddeeyey in Somaliland goboladeeda kale ay ka horeeyaan Ceerigaabo iyo Sanaagta kale ee ay maamulaan kadib markii shacabku ay diideen inay waxqabsadaan iyaguna isku jeensadeen sida uu hadalka u dhigay.
Waxa xusid mudan in xukuumadda Somaliland ay isku jeedisey shacabka kunool gobolka Sanaag isla markaana ay doonayso inay u kala fogaadaan sida kuwa degan gobolka Sool oo aysan jirin beel beel ku xiran.